Bogga ugu weyn Waa maxay Qoraalka Dakhliga Tallaabooyinka Badan leh? Sidee ayay u shaqaysaa 2021
Isha sawirka: www.corporatefinanceinstitute.com
Qoraalka dakhliga ee tallaabooyinka badan leh waa qaab ay ganacsatadu isticmaalaan si ay u soo sheegaan faa'iidadooda.
Shirkadaha ay dadweynuhu ka ganacsadaan waxaa waajib ku ah inay qeexaan faa'iidada guud iyo kharashaadka hawlgalka iyo dakhliga ka soo gala ilo kale. Tani asal ahaan waa sababta ay ugu baahan yihiin inay xisaabiyaan qaabka dhowr tallaabo ee bayaannada dakhliga.
Sidoo kale, waxay ku liis garaysaa alaab qaybo kala duwan si ay ugu sahlanaato adeegsadayaasha bayaanka dakhliga si ay si fiican u fahmaan hawlgallada muhiimka ah ee meheradda.
Intaa waxaa sii dheer, shirkadaha leh ilo dakhli oo tiro badan ayaa qabsan kara dhammaan macaamil ganacsi marka bayaankan dakhliga la diyaariyo.
Nala joog intaan sharraxayno sida loo xisaabiyo bayaanka dakhliga tallaabooyinka badan leh iyo sidoo kale inaan siinno qaaciddada loo baahan yahay si loo xisaabiyo.
Waa maxay Qoraalka Dakhliga Tallaabooyinka Badan leh?
Qoraal dakhli oo dhowr tallaabo ah ayaa soo sheegaya dakhliga shirkadda, kharashyada, iyo faa'iidada guud ama khasaaraha muddo cayiman. Waxaa si kale loogu yeeri karaa bayaanka faa'iidada iyo khasaaraha badan leh.
Waxay bixisaa falanqayn qoto dheer oo ku saabsan waxqabadka maaliyadeed ee ganacsiga.
Qaabka bayaan dakhli oo dhowr tallaabo ah ayaa ah mid kala saaraya dakhliga hawlgalka shirkadda iyo kharashaadka dakhligooda iyo kharashaadka aan shaqaynayn.
Kala -duwanaanshahani wuxuu siinayaa aragti ku saabsan sida hawlaha ganacsi ee aasaasiga ah ee shirkaddu u soo saarto dakhli oo ay u saamayso kharashyada marka loo eego waxqabadka hawlaha kale.
Sida muuqata, bayaan dakhli oo dhowr tallaabo ah ayaa adeegsada isla'egyo badan si loo xisaabiyo dakhliga saafiga ah. Tani waxay u saamaxaysaa inay xisaabiso macaashka guud iyo dakhliga hawlgalka.
Akhri: Top 10 Software Xisaabaadka Ganacsiga Yaryar ee 2021
Waa Maxay Qaybaha Qoraalka Dakhliga Tallaabooyinka Badan leh?
Qaybaha muhiimka ah ee bayaan dakhli oo dhowr tallaabo ah waa:
1. Madaxa hawlgalka - Faa'iidada Guud
Faa'iidada guud waxay ku jirtaa qaybta koowaad ee bayaan dakhli oo dhowr tallaabo leh. Waxaa laga helaa marka laga jaro Qiimaha Alaabta laga iibiyo Wadarta Iibka.
Taasi waa; Wadarta Iibka/Iibka Iibka - Qiimaha Alaabta la Iibiyay.
Xisaabintaan kore, ma jiraan kharashyo kale oo lagu daray marka laga reebo soo -galinta lacagta caddaanka ah ee iibinta alaabta iyo kaashka ka soo baxa iibsiga alaabta.
Xaqiiqdii, macaashka guud wuxuu muujinayaa sida ay shirkaddu ugu macaash badan tahay soo saaridda ama iibinta alaabteeda.
Deyn -bixiyeyaasha shirkaddu waxay adeegsadaan doorsoomahan si ay u go'aamiyaan haddii shirkad ay ka soo bixi karto waajibaadkeeda maaliyadeed oo ay dib u bixin karto sumcadda ka maqan marka loo baahdo.
Sidoo kale, maalgashadayaashu waxay sidoo kale adeegsadaan macaash guud si ay u go'aamiyaan macaashka ganacsiga iyo caafimaadka guud ee shirkadda.
2. Madaxa hawlgalka - Kharashka iibinta iyo maamulka
Kani waa qaybta labaad ee bayaan dakhli oo dhowr tallaabo leh.
Dhab ahaantii, kharashaadka iibinta iyo maamulka ee hawlaha hawlgalka ayaa halkan lagu qabtay. Kharashaadka iibintu waxay ka kooban yihiin dhammaan kharashyada la galay marka alaabta la iibinayo macaamiisha. Tan waxaa ka mid ah qaybinta, suuq -geynta, iyo iibinta kharashyada alaabta ama adeegga.
Sidoo kale, kharashyada maamulku waa kuwa kharashyada urur ayaa soo gala oo aan si toos ah ugu xidhnayn hawl gaar ah laakiin la xidhiidha ururka guud ahaan. Tan waxaa ku jira mushaharka shaqaalaha, kirada xafiiska, iwm.
Wadarta kharashyada hawlgalka waxaa laga helaa kharashaadka iibinta iyo kharashaadka maamulka. Waxaa loo xisaabiyaa sida soo socota:
Dakhliga Hawlgalka = Faa'iidada Guud - Kharashyada Hawlgalka
3. Madaxa aan shaqayn
Qaybta saddexaad waa madaxa aan shaqaynayn.
Qaybtani waxay liis garaynaysaa dhammaan dakhliyada ganacsiga iyo kharashaadka aan la xiriirin hawlaha ugu waaweyn ee meheradda.
Ka hor inta aan shay lagu tilmaamin dakhli hawlgal ama kharash, waa inay ka timaaddaa ilo aan ka mid ahayn ganacsiga ugu weyn/caadiga ah ee shirkadda.
Tusaale ahaan, kharash aan shaqaynayn wuxuu noqon karaa dalab dacwad oo ganacsigu siiyo macaamil dhibsan. Tusaale kale waa magdhawga caymiska ee shirkaddu u hesho magdhawga hantida.
Sidaa darteed, si loo xisaabiyo madaxa aan shaqaynayn, waxaad soo koobaysaa dhammaan walxaha ku hoos jira qaybtan. Sidaas darteed, waa:
Dakhliga saafiga ah = Dakhliga Hawl-galka + Alaabada aan shaqaynayn
Noocee Ganacsi Ayaa Isticmaala Qoraalka Dakhliga Tallaabada Badan?
Nidaamkan xisaabaadku wuxuu ku habboon yahay ganacsiyada waaweyn ee adag oo leh liis dheer oo dakhli iyo kharashyo ah.
Intaa waxaa dheer, shirkadaha dadweynaha waxay u baahan yihiin inay tan diyaariyaan sababtoo ah maamulayaasha sharciyeynta. Waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo kala sooci lahaa warbixinta maaliyadeed iyo hawlaha ganacsiga asaasiga ah iyo kuwa aan aasaasiga ahayn.
Tusaale ahaan, shirkadaha wax-soo-saarka oo leh ilo dakhli oo badan waa inay diyaariyaan bayaan dakhli oo tallaabooyin badan leh si dakhliga iyo kharashyada ka soo baxa hawlaha ganacsiga aasaasiga ah looga duwo hawlaha aan aasaasiga ahayn.
Akhri: Adeegyada Mushaharka Ganacsi ee ugu Fiican - Lacag -bixinta Shaqaalaha ayaa la fududeeyay
Sidee U Diyaargarowga Bayaanka Dakhliga Tallaabo -Badan?
Miyaan hore u sheegnay inuu jiro bayaan dakhli oo hal talaabo ah? Qoraalka dakhliga hal-tallaabo wuxuu bixiyaa warbixin maaliyadeed oo sahlan, kuma jirto faa'idada guud iyo dakhliga hawlgalka.
Qoraalka dakhliga ee tallaabooyinka badan leh ayaa ah qaabka ugu adag ee qabashada dhammaan macaamil maaliyadeed.
Waa kuwan tillaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo si aad ugu abuurto bayaan dakhli oo dhowr tallaabo ah ganacsigaaga.
1. Dooro Muddada Warbixinta
Waxaad u baahan tahay inaad bilowdo xilli warbixineed ka hor intaadan diyaarin bayaanka dakhliga.
Caadi ahaan, bayaannada dakhliga waxaa la diyaariyaa bil kasta, saddexdii biloodba mar, ama sannad walba. Shirkadaha dawladu waxay diyaariyaan saddexdii biloodba mar iyo sannad walba taas oo qayb ka ah waajibaadkooda sharci.
Faa'iidada ah diyaarinta bayaannada dakhliga bil kasta waa inay kaa caawiso inaad la socotid sida faa'iidadu isu beddesho waqti ka dib, tani waa war aan qiimo lahayn oo go'aan gaarista ah.
2. Abuur Madaxa Document
Madaxa cinwaanka bayaankaaga dakhliga ee tallaabooyinka badan leh wuxuu u gudbiyaa akhristayaasha macluumaad muhiim ah.
Asal ahaan, waxay sheegaysaa magaca shirkaddaada, waxay u aqoonsataa dukumintiga inay tahay bayaan dakhli, waxayna qeexaysaa muddada warbixinta ee uu daboolay dukumintigu.
3. Ku dar Dakhliga Hawlgalka
Wadarta hawlaha Hawlgalku waxay ku jiraan qaybta sare.
Si aad tan u xisaabiso, marka hore, ku dar dakhligaaga/dakhligaaga hawlgalka. Kani waa dakhliga iibka ee iibinta alaabtaada iyo adeegyadaada.
4. Ku dar kharashyada hawlgalka
Ka dib marka lagu daro dakhliga hawlgalka, waxa ku xiga waa in lagu daro kharashyada hawlgalka.
Tan waxaa ku jira qiimaha alaabta la iibiyey, iyo kharashyada kale sida kharashyada xayaysiinta, mushaharka, kharashyada maamulka, iyo sidoo kale sahayda xafiiska iyo kirada.
5. Xisaabi Faa'iidada Guud
Xisaabi macaashka guud adiga oo ka jaraya qiimaha badeecadaha laga iibiyey iibka saafiga ah.
Magaca shaxanka Faa'iidada Guud.
6. Xisaabi Dakhliga Hawlgalka
Qodobka xiga ee bayaanka dakhliga tallaabooyinka badan leh waa xisaabinta dakhliga hawlgalka.
Ka jar kharashyada hawlgalka macaashka guud si aad u hesho dakhliga hawlgalka.
Qeybta hoose ee waxqabadyada hawlgalka, ku dar cinwaanka Dakhliga Hawlgalka Net ama Dakhliga Hawlgallada oo leh tirada laga helay xisaabinta.
7. Ku dar Dakhliga iyo Kharashaadka aan shaqaynayn
Hoos waxaa ka socda hawlaha hawlgalka qayb kale oo aan hawlgal ahayn. Halkan, waxaad ku dartaa dakhliyada iyo kharashyada hawlaha aan shaqaynayn, oo ay ku jiraan dulsaarka iyo iibinta ama iibsashada maalgashiyada.
8. Xisaabi Dakhliga saafiga ah
Tallaabada ugu dambeysa ee diyaarinta bayaanka dakhliga waa xisaabinta dakhliga saafiga ah.
Si aad sidaas u yeelatid, ku dar dakhliga hawlgalka iyo waxyaabaha aan shaqaynayn iyo cinwaanka sida Dakhliga saafiga ah.
Haddii ay tahay lambar togan, waxaad leedahay macaash. Haddii diidmo tahay, waxaad duubaysaa khasaare.
Halkan waxaa ah tusaale xisaabinta bayaan dakhli oo dhowr tallaabo leh:
Qoraalka dakhliga ee tallaabooyinka badan leh ayaa beddel u ah bayaan dakhli oo hal tallaabo ah maxaa yeelay waxay u isticmaashaa kalagoyn badan xisaabinta dakhliga saafiga ah.
Ugu dambayn, waxay kala soocdaa dakhliga hawlgalka iyo kharashaadka dakhliyada iyo kharashaadka aan shaqaynayn, faa'iidooyinka, iyo khasaaraha.
Shirkadaha leh nidaam maaliyadeed oo qalafsan waxay u baahan yihiin inay adeegsadaan tis si ay u qabtaan dhammaan macaamil ganacsi ee bayaanka dakhliga.
Machadka maaliyadda shirkadaha
Top 10 Software Xisaabaadka Ganacsiga Yaryar ee 2021
Sida lacag looga helo kaydinta 2021 | Talo Run ah
Sida Loo Kordhiyo Xadkaaga Dhibcaha Chase ee 2022 | La cusboonaysiiyay
Xadka deyntaada waa muhiim sababtoo ah waxay saameyneysaa inta aad kharash gareyso waxayna saameyn weyn ku leedahay…
15 Meesha ugu raqiisan in lagu bixiyo jeeg 2021
Fikradda lacag-bixinta jeegga waxay u egtahay dugsi duug ah maadaama aan ku jirno xilligii bangiyada internetka.
Dhammaan bangiyada waxay la macaamilaan lambaro laakiin, bangiga wanaagsan wuxuu bixiyaa adeegyo maaliyadeed oo tayo leh oo ka caawinaya macaamiishiisa inay la kulmaan…
Kanada waxay leedahay dhaqaale si wanaagsan u horumaray oo taageera bangiyada maalgashiga waxayna ka dhigtay ganacsi waara oo muddo dheer…